Antsoina hoe zanak'Andriamanitra isika
"Endrey! Manao ahoana ny fitiavana nasehon' ny Ray ho antsika, dia ny niantsoana antsika hoe zanak'Andriamanitra, sady izany tokoa isika! Koa noho izany dia tsy mahalala antsika izao tontolo izao, satria tsy nahalala Azy izy" - 1 Jao. 3:1
Raha nandinika ny fitiavan' i Kristy i Jaona, dia niloa-bava hoe: "Endrey! manao ahoana ny fitiavana nasehon'ny Ray ho antsika, dia ny niantsoana antsika hoe zanak'Andriamanitra ".
Ho an'ny ankamaroan'ny olona dia tombontsoa manokana ny mahita olona fray avy amin'ny fianakavian' andriana, ary an'arivony ireo mandeha dia lavitra mba hahita olona iray toy izany. Tombontsoa mihoatra lavitra noho izany ny antsoina hoe zanakalahy sy zanakavavin' Ilay Andriamanitra ambony indrindra. Moa misy tombontsoa lehibe kokoa azo atolotra antsika mihoatra noho ny fahafahantsika ho isan'ny fianakavian'Ilay Mpanjaka?
Mba hahatonga antsika ho zanakalahy sy zanakavavin' Andriamanitra, dia tsy maintsy misaraka amin'izao tontolo izao isika. "Koa mivoaha eo aminy hianareo, ka misaraha aminy, hoy Jehovah, (..) Ary ho Rainareo Aho, ary hianareo ho zanako-lahy sy ho zanako-vavy".
Manana lanitra hitodiana isika, sy satroboninahitra horombahina. Izay mandresy ihany anefa no homena ny valisoa. Izay mahazo ny lanitra dia tsy maintsy voatafy ny akanjom-pahamarinana. "Ary izay rehetra manana izany fanantenana miorina aminy izany dia manadio ny tenany mba hadio tahaka Azy". Tsy nahitana faharatsiana na dia kely akory aza teo amin'ny toetr'i Kristy, ary tokony ho toy izany ny fiainantsika. Ireo foto-kevitra izay nifehy ny fiainan'i Kristy no tokony hifehy ny fiainantsika. —Ms, 28, 1886
Amin'ny alalan'ilay sorona tanteraka notanterahina ho an'ny taranak'olombelona mpanota, dia afaka ny ho voavonjy amin'ny faharinganana mandrakizay ireo izay mino an'i Kristy ka manatona Azy (...)
Aoka tsy hisy ho voafitaky ny fahavalo ka hihevitra fa mampietry azy ny manaiky an'i Kristy, na toy inona na toy inona talenta na fahaizana na voninahitra mety ananany. Ny olombelona tsirairay dia tokony hibanjina ny lanitra amim-pankasitrahana sy ho talanjona ary hiloa-bava hoe: "Endrey! manao ahoana ny fitiavana nasehon'ny Ray ho antsika, dia ny niantsoana antsika hoe zanak'Andriamanitra". —YI, 27 Septambra 1894